भट्टराईले मुख खोल्दै दिए – “संविधान संशोधन” गर्नुपर्ने तर्क , नभए सरकार लत्याएर सडकमा – Sanghiya Online
भट्टराईले मुख खोल्दै दिए – “संविधान संशोधन” गर्नुपर्ने तर्क , नभए सरकार लत्याएर सडकमा
Posted on : June 7, 2019 June 7, 2019 - No Comment
काठमाडौँ–समाजवादी पार्टी नेपालका अध्यक्ष डा.बाबुराम भट्टराईले केही दिनमै संविधान संशोधन गर्न सरकारलाई अल्टिमेटम दिने बताएका छन् । अध्यक्ष भट्टराईले अहिले बजेट सेसनको छलफल चलिरहेको र त्यहिँबाटै सरकारलाई अल्टिमेटम दिने बताए । रातोपाटीसँगको कुराकानीमा अध्यक्ष भट्टराईले अल्टिमेटम दिएपछि पनि संविधान संशोधन नभए सडकबाटै आन्दोलन गर्ने बताएका छन् । प्रस्तुत छ अध्यक्ष भट्टराईसँग रातोपाटीले गरेको छोटो कुराकानीको अंशः
संविधान संशोधन नभए सरकारबाट बाहिरिने बताइसक्नु भएको छ । संविधान संशोधनमा के हुन् तपाईहरुका माग ?
संविधान जारी हुने बेलामानै यसका केही अपूर्णताहरु छन् । एउटा त राज्यको पुनर्संरचना ठिक ढंगले भएको छैन । राज्य पुनर्संरचना आयोगले दिएको प्रतिवेदनमा पहिचानका पाँच आधार र सामथ्र्यका चार आधारको जगमा दश प्रदेश बनाउने सिफारिसलाई लत्याएर अहिले जुनखालकोे संघीय ढाँचा प्रशासनिक टाइपको, हिजोकै विकास मोडलमा बनाइयो, त्यो त्रुटिपूर्ण छ । यसलाई सच्चाईनु पर्छ, एउटा बुँदा ।
दोस्रो, अहिलेको शासकीय प्रणाली र निर्वाचन प्रणाली अत्यन्त खर्चिलो, भ्रष्ट्रचारजन्य र देशलाई दिगो शान्ति नदिने प्रकृतिको छ । त्यसकारण प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतिय प्रणाली र पूर्ण समानुपातिक संसदमा जानुपर्छ भन्ने मुख्य त दुई मुद्दालाई लिएर संविधान संसोधन गर्नुपर्छ हामीले भनेका छौँ ।
र अहिलेको सरकारलाई दुइ तिहाई नपुगेको हुँदा पार्टी एकता हुनुपूर्व संघीय समाजवादी फोरमसँग दुई बुँदे सहमति भएको थियो । संविधान संशोधन गर्न दुई तिहाई चाहिने भएको हुँदा आउनुस् संविधान संशोधन गरौँ भनेर तत्कालिन संघीय समाजवादी फोरम सत्तामा गएको थियो । तर सहमति भएको बर्षदिन नाघिसक्दा पनि सरकारले कुनै चासो दिएन । त्यसकारण अब अहिलेको एकीकृत समाजवादी पार्टीले पुन एकपटक सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराउँछौँ र अल्टिमेटम दिन्छौँ । त्यसपछि पनि कुरा सुनेनन् भने सडकमा आएर आन्दोलनको बाटो लिन्छौं ।
कहिलेसम्म पर्खिनुहुन्छ ?
अहिले भर्खर बजेट सेसनको छलफल सुरुवात भएको छ । यहि सेसनभित्र हामीले अल्टिमेटम दिन्छाँै । त्यसपछि उहाँहरु कसरी आउनुहुन्छ, त्यसको आधारमा निर्णय गर्छौँ ।
तपाईहरुले यसअघि पनि सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराइसक्नुभएको छ । अहिले सरकारको तर्फबाट केही एप्रोज भएको छ कि छैन ?
केही पनि छैन । उहाँहरुले नीति कार्यक्रम र बजेट ल्याउनुभयो, त्यहाँ संविधान संशोधनको संकेत कहीँ छैन । बरु उल्टै संविधान सर्व स्वीकार्य भैसक्यो भनेर दम्भपूर्ण ढंगले आइरहनुभएको छ । संघीयतासम्बन्धि संविधानलेनै प्रदेश र स्थानीय तहलाई दिएका अधिकार कटौती हुने गरी ऐन बनाइराख्नुभएको छ । पछिल्लो समय लोकसेवा आयोग मार्फत नौ हजारभन्दा बढी कर्मचारी दरबन्दीको विज्ञापन गरिएको छ । त्यसले हिजो दिँदै आएका समावेशीताको संख्यालाई कटौती गरेर संघीयताको मर्म विपरित जाने प्रयत्न भएको छ । त्यसकारण सरकार सकारात्मक दिशातर्फ हैन उल्टो दिशातर्पm गएको हामीले अनुभूत गर्छौं
राजपासँग एकताको विषय के भैरहेको छ ?
काँग्रेस, अहिलेको नेकपा र राप्रपा बाहेकका शक्तिहरु जो ०५२ साल यताका आन्दोलनकारी शक्ति हुन्, ती सबै शक्तिहरुसँग एकता कायम गरेर बलियो समाजवादी विकल्प दिने प्रयत्न गरिएको छ । त्यसैक्रममा राष्ट्रिय जनता पार्टी, राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी लगाएतका पार्टीहरुसँग हाम्रो वार्ता, संवाद चलिराखेको छ । हामी छिटैनै त्यसलाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउने प्रयत्न गर्छौँ ।
औपचारिक रुपमै वार्ता अगाडि बढेको छैन ?
विभिन्न ढंगले वार्ता संवाद भएका छन् । औपचारिक ढंगले त वार्ता भएको छैन । अनौपचारिक ढंगले कुराकानी भएका छन् । हाम्रो नीति सवै अग्रगामी परिवर्तनकारी शक्तिहरुको बीचमा समाजवादी विचारको आधारमा एकता कायम गरेर देशमा काँग्रेस र कम्युनिष्टको विकल्प दिने समाजवादी शक्ति हुन्छ भन्ने प्रत्याभूति जनतामा गराउने प्रयत्न भएको छ ।
तपाईहरुको पार्टी एकतापछि पुराना सहकर्मी नेकपाका अध्यक्ष प्रचण्डसँग संवाद हुने गरेको छ कि छैन ?
हा हा हा…….भेटघाट कुराकानी हुन्छ । गम्भीर ढंगको कुराकानी त हुन पाएको छैन । त्यै पनि व्यक्तिगत सम्बन्ध अहिले पनि राम्रो छ । पोलिटिकल सम्बन्धको कुरा गर्दा उहाँले गलतबाटो लिनुभयो । वास्तवमा उहाँ एमालेमा विलय हुनु भएकै हो, जतिसुकै भनेपनि । नामले मात्रै कम्युनिष्ट भन्ने बेग्लै कुरा हो । उहाँ यथास्थितिवाद र प्रतिगमनतिर फर्किनु भएकै हो । र उहाँमा विचार नीतिका कुरा भएको देखिदैन, खाली उहाँहरुको पदको भागवन्डाका मात्रै कुराहरु आउँछन् । दुःख लाग्छ, तेत्रो क्रान्तिकारी आन्दोलनको नेता भैसकेको व्यक्तिलाई गुमाउनुपर्दा ।
Ratopari.com बाट बबिता शर्माले लिनु भएको अन्तर्वार्ता
‘डीभी’ प्रणाली रद्द गर्न ट्रम्पको आह्वान, अब डिभि भरेका नेपालीहरुले के गर्छन ?
नेपाली भष्मासुरको वधपछी नेपाली जनतामा फर्केको खुशी देखेर रोगै हरायो – डा. बाबुराम
गुडिरहेको कारभित्र तानेर १९ वर्षे युवतीको बलात्कार, हेल्प लाईन मार्फत् यसरी दिइन उजुरी
राजपालाई मनाउन चुनाब सार्ने तयारि, संबिधान संशोधन नहुने, चुनाब सार्ने, दल दर्ता र छाता चिन्ह लिएर चुनाबमा जाने सहमति
मोर्चासँग रिस फेर्न प्रहरीद्वारा जनताको घरघरमा प्रवेश गरी गुण्डागर्दी शैलीमा तोडफोड
नेपाली बच्चा तस्करी गर्ने कोरियाली महिला किम र चिकित्सक सन्तोष भट्ट जेल चलान
ब्रेकिङ न्युज : लोक सेवा आयोगको विज्ञापन सर्वोच्च अदालतका न्ययाधिस ढुगांनाद्वारा बदर
जसपाभित्र उपेन्द्र यादव र बाबुराम भट्टराईको दम्भ र घमण्डका कारण पार्टि फुटको संघारमा
उपेन्द्र यादवलाइ जोडदार धक्का, प्रदेश सांसदले गरे केपिलाई समर्थन, ओली थप बलियो
सतभरामा रहेको श्री समय माता मन्दिरमा श्रद्धालुहरूको आस्था बढ्दै
मन्त्री यादवको अथक प्रयासमा बागमति नदिमा रोकिएको सडक निर्माण कार्य अगाडि बढाउने सहमति ।
रौतहटमा प्रतिबन्धित लागु औषध गाँजा सहित दुई जना पक्राउ ।